ရေပေးဝေရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန မလိုအပ်ဘူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရေပေးဝေရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန မလိုအပ်ဘူးလား
ရေပေးဝေရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန မလိုအပ်ဘူးလား
Posted by phone_kyaw on May 16, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတွေကို နွေရာသီမှာ ကြားရလေ့ရှိတယ်။ ဒါကတော့ ရေခမ်းခြောက်မှုပဲ ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်း ဒလ မှာဆိုရင် ရေချိူက ရှားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈-နှစ်လောက်က ဒလကိုရောက်ဘူးတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကို သွားလည်တာပါ။ မိုးရာသီမှာ မိုးရေကိုသိုလှောင်ပြီ သုံးရတယ်။ နွေရာသီဆိုရင် ကန်ရေ ကိုသုံးတယ်။ ရေအရည်အသွေးအတော်ညံ့တယ်။ တစ်နေ ့တော့ ရေချိူပြတ်သွားတာနဲ ့ကြုံရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို ့တစ်အိမ်လုံး ရေချိူးဖို ့ရေမရှိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အခုလည်း မီဒီယာမှာ ခဏခဏ ဒီလိုပြသနာတွေကို ကြားနေတွေ ့နေရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းက ရေပေးဝေရေးမှာလည်း သူတို ့အငြိမ်မနေရဘူး။ သူတို ့က အစိုးရ လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်နေရပြန်ပြီ။ အစိုးရက ဒီ ပြသနာကို ပေါ့သေးသေးထင်နေလို ့ယနေ ့အထိ ရေပေါတဲ့နိုင်ငံမှာ ရေရှားတဲ့ပြသနာကိုတောင် မရှင်းနိုင်ဘူး။ တကယ်တမ်းဖြေရှင်းချင်ရင်လွယ်လွယ်ပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရေအရင်းအမြစ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရေကစလို မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေရဲ ့တန်ဘိုးကိုသိပြီး စီမံခန် ့ခွဲနိုင်ဖို ့အတွက် ရေပေးဝေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတော့ လိုတယ်လို ့ထင်တယ်။ ဒါမှ ပြည်သူတွေရေကောင်းရေသန် ့ရရှိပြီး တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါ။ ဒီအတိုင်းသာ မလုပ်ပဲထားရင်တော့ လွန်ခဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ-လောက်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေရှိပြီး ရေငတ်နေတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရေချိူတွေလည်း ပစ်စလက်ခတ်လုပ်တာကြောင့် ကုန်ဆုံးရတော့မယ်။
လူမှာ အရေးကြီးဆုံးက ရေ…ပဲ။ ရေအသက်တမနက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ရေနဲ ့ပက်သက်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ ့ကြပါ။ မလိုအပ်တဲ့ဌာနတွေကို ဖျက်ပါ။ ဥပမာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဟာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီဌာနအစား ရေပေးဝေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာက ဖွဲ ့တာကမှ ပိုလို ့လူတွေအတွက် အကျိူးရှိစေနိုင်တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ကို ဘုန်းကြီးတွေလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ လူကသွားပြီး သူတို ့စီမံခန် ့ခွဲတာ ဆရာလုပ်တာက အင်မတန်ငရဲကြီးပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိပြီး ငွေကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ဘာဝင်ငွေမှ မတိုးတာကိုကြည့်ရင် ဘယ်လောက်နစ်နာလဲဆိုတာကို သိနိုင်တယ်။ ကျနော်ပြောတဲ့ ရေဝန်ကြီးဌာနသာရှိရင် ဒိ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ စီမံခန် ့ခွဲမှုနဲ ့ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်မှု ့ကို ရရှိလိမ့်မယ်။ ရေမရတဲ့နေရာတွေရေရနိုင်တယ်။
သူများတွေ ရေ ရရှိရေးကူညီနေတာကို တွေ ့လည်း ကျနော်လည်းကူညီဖို ့အတွက် တွေးနေမိတယ်။ ကျနော့်အတွေးက မြစ်ချောင်းတွေ အင်းအိုင်တွေကို ပိုက်နဲ့သွယ်တန်းပြီး ရေးပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဝိစိတွင်းကို ခေတ်မှီစက်နဲ ့တူးပေးချင်တဲ့အတွေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လက်နဲ ့တူးတဲ့ အဝိစိတွင်းအစား အဝိစိတွင်းတူဖို ့စက်တွေကို နိုင်ငံခြားကနေ တင်သွင်းချင်တဲ့အတွေးပါ။ ဒါဆိုရင် နေရာဒေသမရွေး အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပြီး မြန်မြန်လည်းတူးပေးနိုင်မယ်လို ့ထင်တယ်။
တရုတ်ပြည်က စစ်ကားတွေနဲ ့စစ်လက်နက်တွေကို နဲနဲလောက်လျှော့ဝယ်ပြီး အဝိစိတွင်းတူးတဲ့စက်လေးများဝယ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို ့ညတုန်းက တွေးမိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒလက လူတွေ ရေကို ဝဝလင်လင် သုံးနိုင်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူမှုရေးအဖွဲ ့အစည်းတွေ ကူညီချင်သူတွေအားလုံးလည်း ကျနော်ပြောတဲ့ စက်လေးများ(Water Well Drilling Machine
) ဝယ်ကြပါလားလို ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ လက်နဲ ့တူးတဲ့ အဝိစိတွင်းပုံစံကို ခေတ်မှီနည်းပညာနဲ ့ပေါင်းစပ်ကြတာပေါ့။ ကျနော်လည်း လှူချင်လို ့ပါဗျာ။ရေအကျိူးဆယ်ပါး မတောင်းပဲနဲ ့ပြည့်တယ်လို ့တော့ ကြားဘူးတယ်။ ဒီလိုလှူလို့့ဆယ်ပါးကိုလည်း မတောင်းပဲနဲ ့မလိုချင်ပါဘူး။ ရေငတ်နေတာကို မကြည့်ချင်လို ့ပါ။
မကြိုက်ရင်လုံးဝလာပြီးမဖတ်နဲ့တဲ့ အစအဆုံးဖတ်ပြီးမှပဲတွေ့တော့တယ် ဒီလိုမှန်းသိ……
ငါ့ကောင်ကြီးရဲ့ Idea ကို ဒီတခါတော့ ကြိုက်သွားပြီးဟေ့…..
ကျနုပ်တို ့နိုင်ငံတွင် ရေပေးဝေရေး ဝံဂျီးဋ္ဌာန မရှိ
မြန်မာနိုင်ငံက.. သောက်ရေသန့်ရရှိမှုမှာ.. ကမ္ဘာတန်း နောက်ကတွက်ရင်.. ၁က ၁ဝထဲပါနေတာ…
အဲဒီရေသန့်ရှားတာဖတ်ပြီး.. အညာဖက်အလည်သွားတုံး.. ရေအိုးတအိုးခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး.. မျက်စိတဆုံးလမ်းလျှောက်နေတဲ့.. ကလေးငယ်လေးတွေ မြင်ယောင်မိသေးတယ်..
ဒါပေမဲ့.. မြန်မာက… ရေအရင်းအမြစ်ရှိတာမှာတော့.. ကမ္ဘာတန်းထိပ်ပိုင်းမှာပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ဟာ.. ရေချိုကို.. သေသေချာချာကိုင်တွယ်စီမံသင့်ပါတယ်..။
ဒီပို့စ်လေးတော့ ဖတ်ရတာ မိုက်သား ၊ အရေးသားကလည်း တကယ်လှူမယ့်ပုံမို့ …လက်မထောင်သွားပါတယ်ဗျို့ …. ။ လှူဖြစ်တဲ့အချိန်ကျလျှင်ပြောပါ သာဓုလာခေါ်ပါဦးမယ်
ရေပေးဝေမှု အပိုင်း ဂရုမစိုက်တာတော့မပြောနဲ့ … အစိုးရက တာဝန်ယူလုပ်နေရတဲ့ … ဂျိုးဖြူရေဆို .. လာချင်တဲ့အချိန်လာတယ် အချိန်မမှန်ဘူး .. ။ အဲ့ဒါကို မစောင့်ပဲ ကိုယ်ပိုင်အဝီစိတွင်းတွေလိုက်တူးတော့ … ကြွက်တွင်းပေါက်တွေလို မြေကြီးတွေ ဂလိုင်ပေါက်ဖြစ်ကုန်ရော … ။ ဟိုးအရင်က ဘုံပိုင်တွေ တပ်ထားပေးတာတောင် … ကြေးခေါင်းမို့ ဖြုတ်ရောင်းလိုရောင်း ၊ သံပိုက်မို့ ရောင်းစားလိုရောင်းစားနဲ့ … အဲ့ဒီရေပိုက်တွေသုံးမရဘူး .. မြေကြီးထဲနစ်နေတဲ့ အပိုင်းကိုလည်း ပြန်မဖော်ကြပါဘူး … ။
တကယ်လို ကိုယ်တိုင်သေချာ ဘာမှမကိုင်တွယ်နိုင်လျှင် ကုမ္ပဏီတွေကို နှစ်အပိုင်းခြားနဲ့ … ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသင့်တယ် … ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာပါလိမ့်မယ် .. ဒီတော့ ဘဏ္ဍာငွေလည်း ပိုရနိုင်ပါတယ် … ။ အခုတော့ … ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဆင်ပြေအောင်မလုပ် … သူများကိုလည်း .. မပေးလုပ်ကိုင်ချင် ဘုကလန့်တိုက်နေတော့… ကြားထဲက ငထွားတွေပဲ ခါးနာနေရတယ် … ။
ကိုဘုန်းကျော်နဲ့ မအိတုန် ငြိမ်းချမ်းရေးရတာ နှစ်ကြိမ်တော့ရှိပြီ။
သူတို့နှစ်ယောက် ညိရင် ရယ်စရာတော့ကောင်းသား။ဟိဟိ………
ကိုကြောင်လေးရေ … ကိုဘုန်းကျော်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရတယ်လို့ပြောတာထက်၊ သူလည်း သိပ်ပြီး တင်တင်စီးစီးတွေ ၊ စော်စော်ကားကားတွေ မရေးတော့တာကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ ရတယ် … ။ ကျွန်မကို အလှူငွေလှူမယ်ဆိုပြီး ပရိုက်ဗိတ်ချက်ကနေ စကားပြောရင်း ၊ နှောင်ဂျိတ်ချတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ ။ စိတ်လည်းတိုရ .. ရယ်လည်း ရယ်ရပါပဲ … ။
ပြောရလျှင် ဒီလူ စိတ်က ဒီလောက်မဆိုးဘူး … ပါးစပ်ကသာ တမင်လိုက်လျောညီထွေမပြောတတ်တာ… ( ရန်စလိုက်ပြန်ပြီ ဟိဟိ ) .. အဲ့ဒါရိပ်စားမိသွားလို့ပါ .. ။
ရေဝန်ကြီးတွေ နိုင်ငံအတော်များများမှာရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ရေကို လုပ်တတ်ရင် ပို ့ကုန်အဖြစ်တောင် နိုင်ငံခြားကို ရောင်းလို့ရတယ်။ စင်္ကာပူဆိုရင် အိမ်သာရေတွေကို ပြန်လည်းသန် ့စင်ပြီးသုံးရတဲ့အထိရေရှားတယ်။ ရေရဖို ့မလးရှားကနေတောင် ဝယ်ရတယ်။ ဩစတျေးလျလည်း ရေရှားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှိတဲ့ရေကို မညစ်ပတ်အောင် လူတွေဝဝလင်လင် သုံးနိုင်အောင် ရေဝန်ကြီးဌာနကို လုပ်ပေးထားကြတယ်။ သူတို ့အလုပ်က ရှိတဲ့ရေကို အဖိတ်အစင်မရှိအောင်နဲ ့ပြည်သူတွေ အားလုံး သန် ့ရှင်းသောရေ သုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေးတယ်။ ကုမဏီတွေကနေတဆင့်အိမ်တိုင်း ရေကို ဝယ်သုံးတယ်။ ဗမာပြည်မှာက လူတွေက ကံကောင်းပါတယ်။ ရေကို အလကားတောင် သုံးလို ့ရတယ်။ ကျနော်တို ့ကတော့ဗျာ ငွေ ရှိမှ ရေသောက်လို ့ရတယ်။ ဘယ်ဟာမှ အလကားမှမရဘူး။ တစ်ခါတလေကြရင် အခုရှိတဲ့ ဝန်ကြီးတွေ ညွန်မှုးတွေရဲ ့စောက်ခွက်တွေကို ပိတ်ကန်ပစ်ချင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါက်တယ်။ သူများနိုင်ငံနဲ ့ယှဉ်ပြီး တွေးလေ အသဲနာလေပဲ။
အရီး ကြားဘူးတာတော့ ဒလ က ရေတွင်းတူးရင် ရေငံ တွေဘဲ ထွက်သတဲ့။
ရေချိုရဖို့ ရန်ကုန်လို ဘက်က ပိုက်နဲ့ သွယ်ပေးမှ ရမလားဘဲ။
ဒီလို တွေးမိတာလေး ကို က ချစ်စရာပါ ကိုဘုန်းကျော်ရေ။
မှန်၏ …. ဒါမျိုးတွေက ဖြစ်သင့်နေတာကြာပါပီ …
အိတုံက သိတ်မှ ကျပ်မပြည့်တာ
ဟုတ်ပါအေ .. ကြပ်မပြည့်တော့လည်း … ကားတစီး ပူဆာခံရတာပေါ့အေ .. အဟက် .. အဟက် ..
ရေပေးဝေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ ရှိတော့ရော ဒီလိုစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်မှာပဲလေ..
ဘာများထူးခြားလာမှာလဲ …ပြည်သူတွေ ရေရှားခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာပဲ ..
အုပ်ချုပ်သူတွေ ကြားနေမြင်နေရတာပဲ ..ဘာတွေများကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ပေးလို့လဲ …
လှူတဲ့သူတွေ ရှိတာတောင်ပိတ်ပင်လို့ လှည့်ပြန်ရတဲ့ ရေသန့်ကားပေါင်း မနည်းဘူး …
ရွာတွေဘက်မှာဆို ဒီရွာက ရေပြတ်လို့ တခြားရွာတွေမှာ နွားလှည်းတွေနဲ့ သယ်ကြရတယ် ..
ခုတော့ တိုးတတ်လာပီဆိုတော့ ကားတွေ ထော်လာဂျီတွေနဲ့ပေါ့ ..
ရေရှားတာကတော့ နှစ်စဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူး..အဓိကကတော့ ဝါထပ်တဲ့နှစ်တွေဆိုရင် များသောအားဖြင့် ရေရှားတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်…ဝါထပ်တော့ မိုးခေါင်တယ်ပေါ့ဗျာ…
ဒီနှစ်မှာတော့ ရေပြတ်လပ်မှု က တစ်လကျော်လောက်ခံစားကြရပေမယ့် ..အလှူရှင်တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်..
သုံးခွ ဘက်မှာဆို NLD အဖွဲ့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ရေသန့် တော်တော်များများ ကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်..
နောက်အလှူရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပီးတော်တော်များများဝေနိုင်ခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါပဲ..
စက်ရေတွင်းတွေလဲ အခုဆိုရင် တူးနေပါပီ…..(အလှူရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပါ)
ဝန်ကြီးဌာန အစား အလှူရှင်တွေ စေတနာရှင် တွေ ကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်မယ့် ….
ကူညီမှုအသင်းတွေ ပိုမို များပြားလာအောင်ပဲ ဆုတောင်းသင့်ပါတယ် …
အပြုသဘောဆောင်သမို့ တို့များတော့ ကြိုက်ပါတယ် သို့ပေသိ အဆိုးရကနေ ပုဂ္ဂလိကကို ဥပမာ ရွှေသံလွင်လို ငတတွေကို ရေပေးဝေရေး စနစ် ကန်ထရိုက်ပေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် တို့ဘိရုမာတွေ အတွက် အပြုကနေ အပြူးသဘောဖြစ်မယ် လို့တော့ ထင်မိတယ်…
အင်. ခင်များလို လုပ်စားမယ့် ဉာဏ်တော့ အထွကသားပါလားကွယ်